Askar Fara Badan Oo Lagu Dilay Dalka Hindiya. – Calamada.com
Askar Fara Badan Oo Lagu Dilay Dalka Hindiya.
calamada February 15, 2019 2 min read
Ugu yaraan 40 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Hindiya ayaa lagu dilay qarax aad u xooggan oo ka dhacay gobolka Kashmiir kaas oo lala eegtay gaari bas ah oo ay wateen kolonyo ka tirsan ciidamadaasi, iyadoona weerarkaas lagu tilmaamay midkii ugu xumaa ee waayahan ku habsada ciidamada Hindiya ee gumeysiga ku heysta gobolkaasi.
Saraakiil katirsan Police-ka xukuumada Hindiya ayaa warbaahinta u sheegay in gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo la dhigay wadada dhinaceeda lala helay ciidamo katirsan Military-ga Hindiya oo saarnaa gaari bas ah oo ku sii jeeday magaalada layiraahdo Sirinagar ee gumeysiga ku hoos jirta.
Dad goob joogeyaal ah ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay wadada aadka loo ilaaliyo ee isku xirta magaalooyinka Jamu iyo Sirinagaar ee gobolka Kashmiir islamarkaana lala helay kolonyo ciidamo ah, inkastoo aanan la sheegin tirada gaadiidka ay wateen kolonyadaasi.
Ilo wareedyo katirsan xukuumada Hindiya ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa uu gabi ahaanba burburiyey gaari bas ah oo ay la socdeen ugu yaraan 44 askari, islamarkaana ay ka bad-baadeen kaliya tiro fara ku tiris ah.
Warbaahinada Maxaliga ayaa sheegay in askarta la dilay ay gaareyso ilaa 40 askari, iyadoona ay si halis ah u dhaawacmeen askar fara ku tiris ah oo loola cararay goobaha caafimaadka.
Mas’uuliyada qaraxan waxaa sheegatay jamaacada Jihaadiga ee lagu magacaabo Jeyshul Muxamad ama Lashkar Teybah ee ka dagaalanta gobolka Kashmiir, waxayna sheegtay inuu jawaab celin u ahaa gumdaadka foosha xun ee dolwadda Hindiya ay kula kaceyso dadka Muslimiinta ee ku nool gobolkaasi.
Weerarkan khasaaraha ba’an lagu gaarsiiyey ciidamada dolwadda Kaafirada ah ee Hindiya ayaa lagu tilmaamay midkii ugu xumaa ee qabsada ciidankaas muddo tobanaan sano ah, wuxuuna dhanka kale banaanka soo dhigay awoodda kooxaha Jihaadiyiinta ee ka dagaalamaya gobolkaas kuwaas oo sanadihii dambe ay dowladda Hindiya sheegeysay in ay ka awood roonaatay.
Previous: Madaafiic Lagu Garaacay Saldhiga Ciidamada Mareykanka Ee Balidoogle.
Next: Qarax Askar Lagu Dilay Oo Ka Dhacay Magaalada Muqdisho.